Nhau - Iyo yekuvaraidza yekugadzira yehembe dhizaini machira
Kugadzirwa kwemachira kunogona zvakare kunzi kuve kwechipiri dhizaini yemachira ehembe. Inoreva kugadziriswa kwechipiri kwemachira akapera zvinoenderana nedhizaini inoda kuburitsa mitezo mitsva yekugadzira. Iko kuwedzera kwekufunga kwemugadziri uye kune zvisingaenzanisike mitsva. Inoita kuti basa remugadziri riwedzere kusarudzika.
Nzira dzekupfeka machira ekuvakazve
Nzira dzinonyanya kushandiswa ndedze: kuruka, kuisa murwi, kutetepa, concave uye convex, kuburitsa-kunze, kupurinda machira, nezvimwewo, mazhinji acho anoshandiswa mukugadzirwa kwembatya kuratidza nzira idzi, asiwo chejira rese.
Kugadzira kuruka, neakasiyana maratidziro eshinda, tambo, tambo, ribhoni, yekushongedza tambo, crochet kana kuruka nzira, zvakabatanidzwa mumhando dzakasiyana siyana dzekugadzira mabasa, kugadzira convex uye concave, crisscross, inoenderera, musiyano ekuona mhedzisiro
Kuisira, kupindirana akasiyana mavara uye mavara.
Iyo inozivikanwawo sekuteterera, kuteterera kunogona kupfupisa kana kudzikisa chikamu chakareba uye chakafara chejira rejasi, ichiita kuti nguvo igare yakasununguka uye yakanaka. Zvichakadaro, iyo inogona zvakare kupa kutamba kune iyo drape uye yakarongedzwa yakasarudzika hunhu hwejira, iyo isingaite chete kuti nguvo igare uye inokwana, asi zvakare inowedzera yekushongedza mhedzisiro.
Nekuti ine zvese zvinoshanda uye zvekushongedza mhedzisiro, yanga ichishandiswa zvakanyanya mune semi-yakasununguka uye yakasununguka zvipfeko zvevakadzi, izvo zvinoita kuti zvipfeko zvive zvine chirevo uye zvine hupenyu.
Hollowing, kusanganisira hollowing, kuveza gomba, hollowing ndiro mutsetse, kuveza kesi, etc.
Mukugadzirwa kwemafashoni, dhizaini, machira uye tekinoroji zvinhu zvakakosha, uye machira echipiri dhizaini anoita basa rinowedzera kukosha. Chidimbu chemucheka wakanaka pamuviri, chimiro chisina kujairika fashoni yakanaka. Mucheka mushure mekugadzirwa kwechipiri unowirirana zvakanyanya nepfungwa yemugadziri, nekuti yakatopedza hafu yebasa rekushongedza zvipfeko, uye zvakare ichaunza kurudziro uye chishuwo chekusika kumugadziri.